USolwazi Hoosen Jerry Coovadia – The Ulwazi Programme
USolwazi Hoosen Mahomed ‘Jerry’ Coovadia wazalelwa eThekwini ngo-1940. Ungudokotela waseNingizimu Afrika futhi njengamanje (kusukela ngoJulayi, 2003) unguMqondisi Wezesayensi weDoris Duke Medical Research Institute e-University of Natal, ematasa ezimisa njenge uNdunankulu wesikhungo sokucwaninga nge-HIV / AIDS emazweni asathuthuka.
U-Jerry Coovadia ngu-Victor Daitz uSolwazi osafufusa eNyuvesi yaKwaZulu-Natali kwezocwaningo nge-HIV / AIDS, futhi uyilungu leKhomishini Yokuhlela Kazwelonke.
Ushicilele amaphepha ahamba phambili ngesayensi eyisisekelo ne-pathogenesis, ukuphathwa kwemitholampilo, izifo ezithathelwanayo, ukuvimbela, kanye nezimo zesimo, ngezimbangela ezinkulu zokugula, ukukhubazeka nokufa, ezinganeni zase-Afrika.
Yena neqembu lakhe banokuhlangenwe nakho okukhulu nokushicilelwa okunegunya elikhulu ngezici ezahlukahlukene zesifo se-Nephrotic Syndrome kubantu base-Afrika nabaseNdiya baseNingizimu Afrika. Banikele ngezahluko eziningi kulokhu emibhalweni emikhulu ye-nephrology yamazwe omhlaba. Lezi zincwadi zishintshe indlela yokwelashwa kwalezi zinkinga ngokususelwa kwizifundo ezivela emazweni athuthukile.
Waqokwa waba ngu-Associate Professor e-University of Natal ngo-1982 kwathi u-Ad Hominem Professor ngo-1986. Kusukela ngo-1990 kuya ku-2000, wasebenza njengo-Profesa neNhloko Yezingane Nezempilo eNyuvesi yaseNatali. UMqondisi we-Biomedical Science Centre for HIV / AIDS Networking (HIVAN), kanye nomqondisi wesayensi we-Doris Duke Medical Research Institute e-Nelson Mandela School of Medicine e-University of KwaZulu Natal.
Wanikezwa umklomelo we-2013 AAAS Award we-Scientific Freedom and Responsibility. Uthole noMklomelo we-Star of South Africa wango-1999 kuMongameli u-Nelson Mandela kanye noMklomelo ka-Nelson Mandela ka-2000 Wezempilo Namalungelo Abantu.